Tag: ụgwọ ọrụ | Martech Zone
Okwu hacking na-enwekarị echiche na-adịghị mma metụtara ya dịka ọ na-ezo aka na mmemme. Ma ọbụna ndị na anataghị ikike mmemme na-mgbe niile na-eme ihe iwu na-akwadoghị ma ọ bụ na-akpata nsogbu. Hacking bụ mgbe ụfọdụ a workaround ma ọ bụ a shortcut. Itinye otu mgbagha maka ịzụ ahịa na-arụkwa ọrụ. Nke ahụ bụ ibu hacking. Uto hacking na mbụ etinyere mmalite onye dị mkpa iji na-ewu mmata na doro… ma enweghị ahịa mmefu ego ma ọ bụ ego ime ya.
Ndi Omuma Kwesịrị Takekwụsi Ike na Okwu Ọha?
N'ụtụtụ a, agbataghị m akara na Facebook. N'ime afọ gara aga, mmelite ha dabara na mwakpo ndọrọ ndọrọ ọchịchị, achọghịzi m ịhụ ụdị adịghị ike ahụ na ndepụta m. Mma nsitịn̄ ekikere mi ke ndọ ke ediwak isua. Ọzọkwa. Anọ m na-ele anya ka ndị na-eso m gbanwere ka ọtụtụ ndị kwenyere m ebe ndị ọzọ na-ekwenyeghị ekwenyeghị na ya. Ahụrụ m ụlọ ọrụ ndị m na-achọ ịlụ pụọ na-arụ ọrụ
Pollfish: Otu esi aghaputa nyocha nke intaneti nke oma site na Mobile
Bọchị Sọnde, Machị 5, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Ray Beharry
Created mepụta nyocha nyocha ahịa zuru oke. Ugbu a, kedu ka ị ga-esi kesaa nyocha gị wee nweta ọnụọgụgụ ọnụọgụgụ ọnụọgụ ọsọ ọsọ? 10% nke ijeri $ 18.9 ijeri ahịa nnyocha emefu na-nọrọ na online nyocha na US You na mulled a ọzọ ugboro karịa ị na na na na kọfị igwe. Created mepụta ajụjụ nyocha, mepụta azịza ọ bụla – wee zuo oke usoro ajụjụ a. Mgbe ahụ ị nyochara nyocha ahụ, wee gbanwee
Igodo asaa maka obere azụmaahịa na azụmaahịa
Wednesday, September 17, 2014 Na Tọzdee, Septemba 16, 2014 Douglas Karr
Mgbe anyị na-enyere nnukwu azụmaahịa na mgbali ahịa ha na ahịa ha, anyị bụ obere azụmaahịa anyị. Nke ahụ pụtara na anyị nwere oke ego na ka ndị ahịa na-ahapụ, ọ dị mkpa na anyị nwere ndị ahịa ndị ọzọ na-ewere ọnọdụ ha. Nke a na-enyere anyị aka ịhazi ego anyị na-agbanye ọkụ! Ọ bụ ọnọdụ siri ike, n'agbanyeghị. Anyị na-enwekarị naanị otu ọnwa ma ọ bụ abụọ iji kwadebe maka ọpụpụ nke otu onye ahịa yana ịbanye na
Ikike gị nwere ike ịdabere na ndị ahịa dabere na ọdịdị ala na akụkọ ihe mere eme na-aga n'ihu na-akawanye mma. Ego oru nwere ike ugbu a imeghe ọnụ ụzọ nke ụgwọ ọrụ, iguzosi ike n'ihe omume na-enye ozugbo zụrụ iji gị akụ. Card-Linked Marketing (CLM) bụ mgbe ndị ahịa na-abịakwute ndị ahịa ozugbo site na nkwupụta akụ ha n'ịntanetị. N'ezie, Bank of America na-ejizi Cardlytics eme ka ike BankAmeriDeals. Maka ndị mgbasa ozi, Cardlytics na-anapụta ebumnuche n'ọtụtụ, ịkwụ ụgwọ maka arụmọrụ na ọnụego ziri ezi maka ndị ahịa dabere
Na Mọnde, Nọmba 13, 2012 Satọdee, Nọvemba 10, 2012 Douglas Karr
Mgbe m rụrụ ọrụ na akwụkwọ akụkọ, ọ na-adịkarị m ka anyị na-eme ihe azụ. Anyị na-enye ọtụtụ ndị ọhụrụ izu nke akwụkwọ akụkọ ọ bụla ọhụrụ debanyere aha. Anyị nwere ndị debanyere aha bụ ndị kwụrụ ụgwọ zuru price maka iri abụọ gbakwunyere afọ na mgbe natara a ego ma ọ bụ ọbụna a na-ekele gị ozi… ma anyị ga-enye onye na-enweghị iguzosi ike n'ihe ka anyị ika na ozugbo ụgwọ ọrụ. Ọ baghị uru. Olee uru ọ na-aghọrọ maka ihe na-akpali akpali